Ukufumana phi iMidlalo yasimahla? Yazi ezona zikhetho zibalaseleyo! Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ungayifumana phi imidlalo yasimahla? Yazi ukhetho olungcono!
Julayi 8, 2019 0 IiCententarios 717
Enye yeendlela zokuzonwabisa ezifuneka kakhulu yimidlalo. Isizathu sokuba, abantu abaninzi bazibuze Ungafumana phi imidlalo yasimahla? Ngethamsanqa, i-intanethi inewebhusayithi ezininzi zokudlala. Ezi zinokuqokelela okuphezulu kwemidlalo yasimahla, ekhoyo kwiPC, iselfowuni, izixhobo zekhomputha kunye nezinye izixhobo.
Namhlanje, amaqonga amaninzi anika abasebenzisi bawo amakhulu emidlalo ekhululekileyo kwi-Intanethi. Nangona kunjalo, kunokuba nzima kakhulu ukufumana iwebhusayithi ekuvumela ukuba ukhuphele simahla imidlalo esemthethweni kunye ekumgangatho ophezulu.
Okulandelayo, ndiza kwabelana nawe ngayo ezona qonga zemidlalo yasimahla. Ke, unokufumana umdlalo olungele ngokufanelekileyo ukuthanda kwakho kunye neemfuno zakho. Fumana ngoku!
Elona qonga lilungileyo lokufumana imidlalo yasimahla
Ngaphandle kokuthandwa okudumayo kwemidlalo, kunokuba nzima kakhulu ukwazi phi fumana imidlalo yasimahla ukufaka kwisixhobo sakho. Kodwa, ukuba uzimisele ukuthatha ixesha lokufumana ukukhutshwa simahla kwaye unikezela uya kubona ukuba ukukhuphela imidlalo yasimahla akunakwenzeka.
Ukuba ukhetha ukukhangela ngokukhawuleza, unokukhetha imidlalo ekwi-intanethi, efumaneka simahla kumaqonga amaninzi.
Ngokukhawuleza, ndiya kukwazisa ngokwahlukileyo iiwebhusayithi zokudlala, apho unokufumana imidlalo yokukhuphela okanye ukudlala kwi-Intanethi simahla. Ezi zezi:
Yiplatifomu egxile kwimidlalo ezimeleyo eyilwe ziisudiyo ezincinci. Ngale webhusayithi unokukhuphela imidlalo kunye nokuyifaka kwiWindows, Linux, Android, iOS kunye nesixhobo seMacOS.
Ayisiyeyona midlalo yokugqibela ithandwayo, okanye eyona ibalaseleyo. Nangona kunjalo, kule webhusayithi uza kufumana izihloko ezixabisekileyo phakathi kwamawakawaka emidlalo ekhoyo.
Indawo yakho yewebhu ine icandelo lemidlalo yasimahla phantse naluphi na uhlobo, njengo:
Abadlali abaninzi kunye nabanye abaninzi.
Ikhathalogu ye-itch.io iqulethe ngaphezu kwemidlalo ye-165.000 kunye needemo. Ukuba ufuna ukufumana imidlalo yasimahla ungahluza uluhlu ngamaxabiso.
I-cosmos yemidlalo eshiywayo, leyo yogcino lwe-intanethi. Kweli qonga uza kufumana imidlalo yakudala, ukusuka kunyaka we-1830 kude kube namhlanje. Ngemidlalo engaphezulu kwe-4.000 ekhoyo ye-MAS-DOS online simahla. Kodwa yabelana ngeekhonkco ezikusa kumaphepha apho unokuzikhuphela kwaye uzifake kwisixhobo sakho.
Eli qonga lilungile ukuba ulikhangela imidlalo yakudala bathanda:
Ifomula kaFerrari enye.
Kwivenkile yeMicrosoft uyakufumana ikhathalogu ebanzi ye imidlalo ekhoyo yokukhuphela kwisixhobo sakho seWindows.
Le venkile ixabisekileyo idityaniswe nenkqubo yakho yeWindows 10, ikuvumela ukuba ufumane icandelo kudidi lwemidlalo ebizwa, imidlalo yasimahla. Kuyo, uya kufumana Uluhlu lwemidlalo lweentlobo ezahlukeneyo zohlobo.
Kwiprofayili yomdlalo ngamnye ungabona zonke iinkcukacha zayo, kunye nenkcazo, imifanekiso kunye nokulinganiswa komsebenzisi.
Eyona nto ingcono kukuba iyenza lula inkqubo yokukhuphela umdlalo. Kufuneka ucinezele iqhosha, ulifumane ngoku kwaye kwimizuzu yemizuzu ungawuwonwabela umdlalo.
Iqonga leziko eligunyazisiweyo le-videogame firm Electronic Arts. Ngale venkile imangalisayo ungafumana inqwaba yemidlalo yasimahla ekhoyo yokudlala kwi-Intanethi okanye ukhuphele kwi-PC yakho.
Xa usenza iakhawunti yasimahla kwaye ufake usetyenziso kwi-pc yakho, uya kuba nokufikelela kwikhathalogu yayo yonke. Ukongeza, uya kufumana icandelo eliqinisekileyo lemidlalo yasimahla kunye nomnye obizwa, mema indlu. Eli candelo libeka ecaleni kwakho uluhlu lwezinto ezichaziweyo kunye nemidlalo egqibeleleyo, oya kuyifumana mahala okwethutyana.
Uyakuyifumana yonke imidlalo yabo ngokusemthethweni kunye nenqanaba eliphezulu.
Iweb yemidlalo yokuhanjiswa kwemidlalo egqwesileyo. Umsi ubeka ecaleni kwakho icandelo elikhulu le imidlalo yasimahla yokukhuphela kwikhompyuter yakho kunye nenkqubo yokusebenza yeWindows.
Ukufumana imidlalo yasimahla kule venkile kuya kufuneka uye kwicandelo elibizwa ngokuba "simahla ukudlala". Unokwenza lula ukuhambisa isiza usebenzisa iisefa ezahlukileyo onazo. Isebenza iintlobo ezahlukileyo kunye neendidi njengoko zinjalo: abathengisi ababalaseleyo, ekudlalwa ngabo, abatsha nabathandwayo.
Kwindawo yokudlala simahla uza kufumana iinombolo zemidlalo ezaziwayo nezingaziwayo. Ukuba awuqinisekanga ukuba ngowuphi oza kuthatha isigqibo, unokujonga amanqaku omsebenzisi kwiprofayile yomdlalo.
Kuyimfuneko ukuba udale i-akhawunti kwiqonga kwaye ufake usetyenziso kwi-pc yakho. Ngale ndlela, unokufikelela kwilayibrari yakho yomdlalo kunye nokuba kunokwenzeka ukhuphele nawuphi na umdlalo.
Inkqubo ye-Gog yeyokwinkampani yasePoland iCD Projek. Oku kunika abasebenzisi bayo ukuthengiswa komdlalo kunye nenkonzo yokuhambisa. Ukongeza, uya kufumana ikhathalogu ebanzi yezihloko ezihlawulelweyo, kunye nezibanzi uluhlu lwemidlalo yasimahla ye-pc yakho.
Ukufumana zonke iinketho ezikhoyo, kufuneka uye kwicandelo loGcino kwaye ucofe mahala. Kwi-GoG.com uza kufumana iidemo, ipakethi kunye nokunye okongezelelekileyo kwimidlalo ehlawulelwayo nesimahla. Ukongeza, ibonelela ngeentengiso zethutyana apho unokukhuphela khona imidlalo ehlawulelweyo ngaphandle kwendleko.
Njengamanye amaqonga, kufuneka wenze iakhawunti kwaye ufake usetyenziso kwikhompyuter yakho, ukuze ube nakho ukufikelela kuwo wonke umxholo wayo.
Lelinye lamaqonga amatsha okufumana imidlalo yasimahla yePC yakho, kwisitolo sokuhambisa umdlalo, esabelwe iAmazon kuqala. Ke ngoko, ukuba ubhalisile kwi-Amazon ungazama i-Twich mahala.
Ukongeza, unokufumana imidlalo yentengiso ngaphandle kwendleko, inika ezinye izibonelelo Njengemidlalo ngaphandle kwentengiso, imifanekiso ekumgangatho ophezulu kunye neminye.
Ukuphucula amava akho lokusebenza kunye nemidlalo, iTwitch inikezela abasebenzisi bayo ukupakisha, ukuphuculwa kunye nokuninzi komxholo owongezelelweyo.
Ungayisebenzisa le venkile kwi-intanethi okanye ukhuphele uguqulelo lwedesktop, oluququzelela inkqubo yokukhangela.
Elinye lamaphepha aphambili kwimidlalo ye-Intanethi. Kuyo uya kufumana imidlalo emininzi yasimahla.
Impumelelo yayo ibangelwa yikhathalogu ebanzi yemidlalo kunye ukudlala ngokulula Umdlalo ngamnye ofumanekayo. Into emnandi kukuba eli qonga likhululekile ngokupheleleyo kwaye alifuni ubhaliso ukuze ube nokufikelela okungapheliyo kwimidlalo. Nangona kunjalo, ungabhalisa kwelo phepha ukuba ufuna ukuba nenxaxheba ebonakalayo, yenza uluhlu lwemidlalo oyithandayo uze ugcine impumelelo.
Ngaphandle kokungabi yenye yezona ndawo zidumileyo kwiwebhu, inezixhobo ezininzi ongasokuze uzifumane zifumaneka kwamanye amaqonga emidlalo. Kananjalo, ulawulo lwabazali kunye nezinye iilwimi ezingaphezu kwe-20 ziyafumaneka ekuguquleleni iphepha.
I-Y8 ayikho nje ngaphezulu kwe Imidlalo ye55.000 yasimahla. Kukwiphepha elinomtsalane ngokubonakalayo, kunye nesakhiwo esilungiswe kakuhle apho unokuhamba khona ngokulula. Inezintlu ezingaphezu kwe-12 kunye neelebhile ze-390 zemidlalo ye-intanethi, eli qonga lelona linconyelwe abantwana kunye nolutsha. Apho unokufumana kwakhona imidlalo emininzi yabadlali abaninzi.
Enye yezikhundla eziphezulu kukhangelo lukaGoogle yimidlalo.com kwaye ayiyonto ingaphantsi. Kweli qonga limnandi uya kufumana ikhathalogu ebanzi yemidlalo yasimahla, enemizobo esemgangathweni ofanelekileyo.
Inezihloko ezininzi ezisebenzayo. Uya kuzifumana ngokwamacandelo ohlukeneyo ezona midlalo zixabisekileyo, ezona zidumileyo nezintsha.
Yeyonawebhusayithi enemibalabala kakhulu, kunye neefilitha ezininzi zokukhangela, apho uya kuhlala ufumana imidlalo emitsha simahla. Ukusukela kweyona midlalo indala kunye neyona idumileyo ye-90 kunye nemixholo yemidlalo yabadlali abaninzi abancinci kwi-intanethi.
Ayinayo ikhathalogu ebanzi yemidlalo njengamaqonga adlulileyo. Nangona kunjalo, yintoni eyenza le ndawo ikhetheke kangaka ngumgangatho wemidlalo yayo.
Ilizwe lomdlalo linikezela abasebenzisi bayo ngaphezulu kwe Imidlalo ye-22.000 ekwi-intanethi yasimahla. Zilungiselelwe ukuze zikwazi ukudlalwa kwi-touch interface yezixhobo zefowuni ngaphandle kokuphazamiseka.
Ngaphandle kwamathandabuzo, yenye yamaphepha afanelekileyo, apho uya kufumana imidlalo yasimahla yokudlala kwi-Intanethi kwikhompyuter yakho okanye kwiselula yakho.
Ukuza kuthi ga ngoku, uluhlu lwethu lweqonga lemidlalo elifanelekileyo. Ngoku uyazi indawo onokufumana kuyo imidlalo yasimahla, unokuba nexesha elimnandi lokudlala eyona nto imnandi kunye nezihlaziyayo ye-pc kunye nezixhobo zefowuni.
Ukuba uyazi amanye amaqonga okudlala afanelekileyo, ungathandabuzi ukushiya uluvo lwakho kwicandelo lethu lezimvo.
1 Elona qonga lilungileyo lokufumana imidlalo yasimahla
1.2 I-Archive ye-Intanethi
2.1 Imidlalo yemini.com
2.4 Ilizwe lomdlalo